maamulka Puntland maxay qarinayaan? | allsanaag
maamulka Puntland maxay qarinayaan?
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya , waxa caawa ku sugan wariyaal Caalamii ah oo ka shaqeeya wakaaladaha aduunka wararkooda tebisa kuwooda loogu akhriska iyo daawashada badan yahay oo halkaa u jooga inay wax ka ogaadaan dawladda Cusub ee Soomaaliya.
Saaka markii weerarku ka dhacay buurta Calmadow, ayaa waxgarad ka soo jeeda gobolka Sanaag waxay la xiriireen weriyaashan wakiilka ka ah Ha’yado warbaahineed oo badan oo caalmi ah , si ay wararkooda ugu daraan dhibta ka jirta buurta Calmadow.
Weriyaashii waa aqbaleen waana ka ogolaadeen waxgaradkii reer Sanaag inay halka tagaan oo caalamka u gudbiyan sida ay wax u dhaceen, hase ahaatee waxay codsadeen cidda amnigooda sugaysa. Markiiba waxa loo sheegay in maamulka Puntland uu amnigooda sugayo.
Markii madaxda ugu saraysa ee Puntland lala xiriiray oo loo sheegay in weriyaashan la soo wado oo kharashkooda la bixinayo, hase ahaatee maamulka laga doonayo inay amnigooda sugaan. Jawaabtii maamulka Puntland waxay noqotay ” maxaa dhacay, ma waxan jirin ayaad doonaysaan in la buunbuuniyo oo caalamka loo soo bandhigo. Waana diideen in weriyaashu soo booqdaan Buurta Calmadow.
Arintan ayaa waxa kuu cadaynaysaa in Dhiiga maalin walba Galgala ku daadanayaa uu noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha Puntland iyo mashruuc ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha. Waana sababta maamulka Puntland uu isaga qura ogyahay marka uu bulshada caalamka la hadlayo waxa ka jira buurta Calmadow
Ugu danbayntii Shalay waxa la dilay gaashaanle dhexe Dhoonge, gaashaanle dhexe Jamac Saxardiid, Gaashaanle Cawil. Maantana waxa la dilay Gaashanle dhexe Tusbaxle. Dilkani istaagi maayo ilaa beesha Warsangeli sida beesha Raxanaweyn laga barakicnayo degaanadooda . Hadaba si taa looga hortago nimankii dilka Gaystay maanta waxay ku jiraan buurta CALMADOW ee waa in Beel ahaan wax looga qabtaa oo la iska ilaawaa maamulka mashruuca ka dhigtay Galgala. Maamulka ogolaaday in Hargaysa oo maleeshiyaadkan argagixisada ah lagu soo tababaray ilaa Afurur oo ah duleedka Boosaaso inta u dhaxaysa inuu hal askari dhigo.
← Yaa soo ababulay xasuuqa Buurta Calmadow? Farmaajo oo taageeray fashilkii hore →